1.6 4K Wallpapers =
Technology television 4K halkan buu joogaa, waana socday oo kaliya si aad u hesho weyn oo dheeraad ah si weyn loo heli karaa sidii markii socda. Laakiin ma waxaad ogaan waxa 4K yahay oo dhan ku saabsan?
Akhri si aad u ogaato waxa 4K yahay, sida ay u kala duwan yihiin ka 1080P qeexitaanka sare, iyo ugu muhiimsan - sababta 4K UHD waa aad uga wanaagsan 1080P HD.
Waa maxay farqiga u dhexeeya 4K Iyo 1080P Video?
Dadka intooda badan waa ay hadda aad u yaqaanaan qeexitaanka sare video tayada 1080P. Waxaa la dhacsan yahay ay la caddeeyo oo ay sabab u tahay, noqday qaab qeexidda heerka sare ee isticmaalka adduunka oo dhan. Xitaa kamaradaha DSLR macaamiisha jaban ah iyo sidoo kale hoos $ 1000 leeyihiin 1080P buuxda awood video duubo maalmahan. Tani ayaa technology qeexitaanka sare gacmaha xitaa ugu miisaaniyadda videographer hiwaayadda miyir ugu soo galay.
Laakiin 4K waa technology in uu helo dareenka hadda, iyo sabab wanaagsan. Waxaa la, si kastaba ha ahaatee, fudud si ay u dareemaan qasan ee u dhexeeya 1080P iyo 4K. Maxaa sax ah ku kala duwan yihiin waxa u dhaxeeya? Waa maxay sababta mid ka fiican yahay kan kale? Run ahaantii aad u sheegi kartaa farqiga? Kuwaani waa su'aalo u baahan in la jawaabay haddii mid ka mid ah waa in ay leeyihiin, aqoon fiican u adag oo ku saabsan mustaqbalka ee aalladda qeexitaanka sare video foomka 4K.
Bal aynu eegno farqiga ugu muhiimsan ee u dhexeeya 4K iyo 1080p. Tani waa, dabcan, arrinta xal.
4K loo yaqaan Ultra High Qeexid (UHD), halka 1080P waxaa si fudud ku tilmaamay High Qeexid. Sida magacyada ay tilmaamayso, 4K UHD ayaa xal la taaban karo ka badan 1080P HD video. Qaraarka 4K waa dhab 3840 x 2160 pixels, halka 1080P ka kooban yahay 1920 x 1080 pixels.
The naqshada 4K waxaa loola jeedaa in ku dhow in ay 4000 pixels siman. Dhaqan ahaan, xal la tilmaamay sida ay pixels taagan iyo in ay dhacdo 1080P, 1080 khadadka taagan samaysan in xal qeexitaanka sare. By la barbardhigo, 4K qoreysa 2160 pixels vertical; koror badan.
Ugu muuqa 16 ah: 9, 4K ka kooban yahay ku dhawaad ​​afar jeer tirada pixels shaashad marka la barbar dhigo technology 1080P - in ka badan siddeed milyan oo pixels u 4K oo kaliya labo million pixels u 1080P. Farqiga Tani waxay keentaa weyn oo ku saabsan qaar ka mid ah faa'iidooyinka ay muhiim u tahay 4K markii mid ka mid ah waxaa la is barbar dhigay in tayada video 1080P ah.
Waa maxay sababta 4K Video fiican yahay 1080P?
Waxaa jira tiro ka mid ah sababaha 4K ayaa ka si cad u hor 1080P marka la eego tayada sawirka. Sababahaa inta badan diirada saaraan arrimaha ku xeeran sida uu yahay awood si loo xaliyo si faahfaahsan ganaax dheeraad ah, ay awoodaan in ay arkaan si faahfaahsan marka fadhida dhow yahay in shaashada, iyo ka-soo-saarka dhibic ka mid ah aragtida ah, awood u leh inay hoos lagu qoro si joogta ah HD iyo qaabab kale halka xafidaada la barbardhigo sare, tayo aad u faahfaahsan oo ah asalka ah (gaar ahaan marka ay u arkaan dhow).
Ugu sareeya saddex sababood in 4K video trumps 1080P waa:
1. Xalinta Detail
Ultra telefishanka High Qeexid isticmaalaya farsamada 4K waa in ay soo saari ugu sir ah oo faahfaahin ka duwan fashion ah dareemi sare, mahad jiritaanka tirada pixels afar afar barbardhigo 1080P awoodaan. Tani waxaa loo arkaa faa'iidada ugu weyn ee video 4K caadiga ah.
Tusaalooyin ka mid ah halka ay tani waa dareemi waa in haya'ad ee timaha ama baalal, iyo sidoo kale sawirada kale ee ay ku jiraan faahfaahin aad u wanaagsan taas oo ay keentay waxaa laga yaabaa in arrimaha sida moire ama yar ee mugdiga ah qaabab ka sokow aalladda qeexitaanka sare. Waxa hubaal ah in marka kor u arkaan dhow, kuwaas oo ay adag tahay si loo xaliyo nidaamyada u muuqdaan in ka yar xiddig ee wax ka soo hadhay screen 4K ah.
2. arkaysid dhaw
Thanks to kordhinta badan ee xallinta in 4K ayaa marka la barbar dhigo 1080P, waxay u saamaxdaa daawadayaasha in la taagan badan oo u dhaw in screen weyn halka riyaaqayaa sawir sax ah. Dhab ahaantii, fiicnayn talinayaa fog daawashada telefishanka 4K ah wuxuu noqon karaa laba jeer sida ugu dhow ee TV joogto ah. Tani waa sababta 4K loo soo maray ee ay ugu fiican marka fadhiya dhow; fadhiya ka dambeeyaan waayo macnihiisu badanaa aadan la kulmi doonaan faa'iidooyinka ay ugu badnaan (in kasta oo weli shaki awoodaan inay ku raaxaystaan ​​ay la caddeeyo sarreeya, iyadoo aan loo eegin fogaanta).
Marka la soo koobo, waxaad ku fadhiisan kartaa laba jeer sida ugu dhow in ay screen 4K ah marka la barbar dhigo shaashad qeexitaanka sare ee caadiga ah aan la arki karin pixelation ka dhacda la kala duwan qeexida hoose.
3. joojinta soo
Inta jeer, cajalad uu u baahan doonaa in kor loo dejiyey in ay xal hoose. Marka ay dhacdo in 4K, mid yaabaa inuu rabo inuu downscale in 2k saarka ah qeexitaanka sare. Baaritaano la sameeyay ayaa muujisay in marka la barbar video tayada kama dambaysta ah ee video 4K ah kaas oo lagu downscaled in 2k, sawirka waa dareemi dheeraad ah oo faahfaahsan oo ka badan ayaa laga yaabaa in markii hore ka abuuraya duubo ee 2k.
Dadka raba iyo filan ugu badan ee suuragalka ah oo tayo leh waayo-aragnimo buuxda sawir soconaya, 4K waa sax oo dhan sanduuqyada. Laga soo bilaabo labada dhibic ka-soo-saarka of view, iyo dhibic daawashada of view ah, taas technology qeexitaanka sare aalladda la doonayo in la beddelo habka aan u daawado videos.
Wata magac Television sida Sony hadda iibinta 4K telefishanka ee qiimaha in enthusiast ka bixin karin, oo ka kooban video iyo aad u badan ayaa la soo saaray ee 4K. Intaa waxaa dheer, waxa ay kaliya wax ku xiran waqtiga ka hor inta kamaradaha macaamiisha DSLR waxay leeyihiin 4K kartida video; iyo DSLR isku Canon 1DC uu mar horaba soo gaaray in guul.
All of this darayaa ilaa 4K noqday technology ah in aan dib dambe oo kaliya in ay gacanta u galisay shirkaddo saarka weyn, laakiin wuxuu noqon karaa mid ku jirta gacanta video ah Shooter maalmeedka iyo kuwa si fudud u jecel yihiin inay arkaan sawirada mooshin ay qaab ugu heer sare ah oo faahfaahsan suurto gal ah.
Marka aad fahmi dhab ahaan waxa 4K yahay, waxaad bilaabi kartaa si loo qadariyo awoodaha ay run iyo faa'iidadiisa iska cad in ka badan 1080p. Sida technology video ah oo mustaqbalka ah, 4K waxaa helo caan iyo aad u badan oo ay maalintii, iyo kuwa ugu xeel dheer oo ka war ay noqon doonto safka hore ee this cusub oo xiiso leh ee video digital.
> Resource > Video > 4K VS 1080P: Maxaad 4K waa ka fiican yahay 1080P